नजिरलाई म्यूजिक भिडियोको नशा ! - Filmyfanda : Always Exclusive Entertainment News Portal SiteFilmyFanda
नजिरलाई म्यूजिक भिडियोको नशा !
फिल्मी फण्डा । नेपाली फिल्ममा साइड हिरोमा चलेका अुनहार हुन् नाजिर हुसेन । फिल्म ‘होस्टेल रिटन्र्स’बाट साइड हिरोमा डेब्यू गरेका उनले निर्वाह गर्ने भूमिका पर्दामा रुचाइन्थ्यो ।
नाजिक मुख्य कलाकार भएका फिल्महरु उहिसाह्रो चल्न सकेका छैनन् । उनी लिड रोलमा भएका ‘राज्जा रानी’, ‘वीरविक्रम २’ जस्ता फिल्म चल्न सकेन । अहिले फिल्म निर्माण नै कम भएको अवस्थामा नाजिरलाई फिल्मको अफर कम छ । चित्त बुझ्दो फिल्म नभएको र एकाध फिल्मको स्क्रिप्ट अध्ययन गरिरहेको नाजिर बताउँछन् ।
फिल्ममा व्यस्तता घट्न थालेपछि नाजिर म्यूजिक भिडियोमा रम्न थालेका छन् । हप्तामा उनी अभिनित म्यूजिक भिडियो रिलिज हुने अवस्था आएको छ । भर्खरै उनले गायक महेश काफ्लेको ‘माया बिरानी’को सिक्वेल ‘माया बिरानी २’ को शुटिङ सकाएका छन् । हुन त फाईदा नै हो फिल्म जस्तो धेरै झम्मार पनि ब्यहोर्नु नपर्ने फस्टफूड आइटममा आम्दानी पनि हुने, म्यूजिक भिडियो नै सही !
यो पनि पढ्नुहोस् :एलिजालाई ‘होम स्पन्सर’ बाहेक नाई ?
फिल्मी फण्डा । नायिकाको रुपमा रजतपटमा डेब्यू गर्दैगर्दा एलिजा गौतमको चर्चा खुबै थियो । पत्रकार ऋषि धमलाकी श्रीमति भएर पनि हुनसक्छ उनको डेब्यू काम हल्लि–खल्लि भएको ।
उनले फिल्म ‘अनुराग’ बाट अभिनयमा डेब्यू गरेकी थिइन् । प्रेम कथामा अधारित फिल्मले हलमा दर्शक पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, फिल्म हेर्न हलमा नेता पुगे दर्शक पुगेनन् । नेताले त तारिफ गरेका थिए । त्यसको फूटेज केही सञ्चारमाध्यबाट हिट पनि भए ।
धमला स्वयमले फिल्ममा लगानी गरे मिडियाबाट भरपुर सहयोग गरे । तर, हातलाग्यो शुन्य । दर्शले फिलम रुचाएनन् । अहिले एलिजा पनि फिल्म विहिन छिन् । कतै उनलाई धमलाले निर्माण गरे भन्दा बाहिरी फिल्मबाट अफर त नआउने होइन ? एलिजालाई पनि ‘होम स्पन्सर’ बाहेक नाई त होइन नि ?